Archive du 26-oct-2020
Tarehy mivoara mena, atao ahoana ?
Noho ny lalan-drà madinika misokatra ao anaty hodi-tava no mahatonga ny tarehy hivoara mena. Antony maro anefa no mety hitarika izany. Tandremo araka izany ny tonga dia mandray fanapahan-kevitra manosotra akora raha vantany miseho io tranga mivoara mena io. Fa inona àry izany no atao ?
mamaly ny matihanina.
Champignons : miaro aminny homamiadanny nono
Misy karazanolona tsy dia zatra mihinana holatra loatra hatao sakafo.
Lehilahy 23 taona aho, miaraka amina vehivavy 44 taona.
Manambady izy io fa mbola tsy manan-janaka, dia te hiteraka amiko, hono. Izy rahateo milaza ho tia ahy nefa tsy foiny ny vadiny. Inona no tokony ataoko ?
Ovy aminny nofon-trondro sy fraomazy
mahasolo vary sy laoka !
Azo hatao sakafo ao anatinny régime ny sandwich. Ity misy karazany iray azonao hatao sakafo atoandro mihitsy. Mahavoky izy ity kanefa tsy mampatavy :
Nalaza tampoka, noho ny vintana
Mandalo ihany ny vintana, ka mila mahay manararaotra izany ! Noho io vintana io nandalo teo aminizy ireo indrindra, no nahatonga ireto mpilalao sarimihetsika ireto ho lasa malaza dia malaza.
Sisim-bava manaintaina eo aminny ankizikely : aleo manatona dokotera.
« Pèrlèche », io no anarana omena ilay ratra, na fanaintainana aminny sisinny vava miseho aminny ankizikely. Maro ny antony mahatonga azy io.
« Femmes » 1. Montre GUESS en très bonne état - Page Facebook  Aux paradis des chaussures contact: 034 40 424 77
Toetram-behivavy 4 tsy zakanny lehilahy
Rehefa tia dia tokony ho vonona hanitsy ny toetra tsy mety sy mety mahatohina na mandratra ny olon-tiana.
Ady amin'ny lefakozatra Tsy tokony ho variana amin'ny Covid-19
Mety hanohintohina ny ezaka vita amin'ny ady amin'ny lefakozatra na ny poliomyélite ny COVID19 hoy ireo olona avotra tamin'ity aretina ity.
Ady atao amin'ny kere Velaran-tany mirefy 9 ha ao amin'ny Kaominina Maroaloke, Antaritarike sy Talaky-bas no hovolen'ny tanora balahazo
Ho fanohanana ireo mponina izay hianjadian'ny kere any Atsimo dia nitondra ny anjara birikiny ny Ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena izay tantanin'Atoa TINOKA Roberto.
Ambatondrazaka Mpandraharaha ara-bary 592 nahazo famatsiam-bola
Famatsiana ara-bola mitentina 972 225 000 Ar, ho an'ny mpandraharaha vavy sy lahy miisa 592 misehatra amin'ny fambolena sy famokarana vary manerana ny kaominina 15 ao amin'ny faritra Alaotra Mangoro no nozaraina ny faran'ny herinandro teo tany
ANDAPA Tovolahy 19 taona tratra nangalatra lavalina
Tra-tehaky ny pôlisy ny herinandro lasa teo, ny tovolahy kely iray 19 taona, nangalatra lavanila tao Ambahikarabo Andapa. Saika mitaraina ho very tahona lavanilahatrany ireo mponina ao an-toerana.
ANTSIRABE Mpampianatra miisa 250 no hanatevin-daharana eny anivonny CEG
Mpampianatra voahofana nandritra ny 2 taona miisa 250 misalotra ny anarana Mahefa no navoaka taminny fomba ofisialy ny
Covid19 6 no nodimandry tao anatinny herinandro
Tao anatinny tarehimarika izay entina isaky ny faranny herinandro dia fantatra fa mahatratra 186 ireo olona vaovao mitondra ny tsimokaretina Covid19 teo anelanelanny 17 oktobra sy ny 23
DRENTP Atsinanana Mikarakara fifaninana sary momba ny covid-19
Nitondra fahalalana maro ho anny rehetra ny fisianny covid-19 teto amintsika. Mbola tsy foana anefa ny aretina, ary mbola
Fanafihana teny Ambohimangakely: Maty ilay raim-pianakaviana, voaolana ny zanany vavy
Tokantrano iray teny Tsarahasina Ambohimangakely no nisy nanafika, ny zoma alina lasa teo. Telo mianaka no mipetraka ao aminity trano voatafika ity ary alika nivovo tao an-tokontany no nanaitra ilay renim-pianakaviana ka nahatonga azy nivoaka, saingy efa nandrasanireo jiolahy tao ambadiky ny varavarana izy.